Radiogram: Music, Sports and Talk Radio 1.3.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.7 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ဂီတ & အသံ Radiogram: Music, Sports and Talk Radio
Radiogram: Music, Sports and Talk Radio ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Radiogram နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုပေါ်ရေဒီယို station နားထောင်နိုင်သည်။ အဘယ်သူမျှမဝေဟင်သာအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် Radiogram ကိုရှေးခယျြ?
ဒါဟာ! အခမဲ့င်နဲ့ NO On-screen ကိုကြော်ငြာထားပြီး
သင်တစ်ဦးကရေဒီယိုဘူတာရုံအပေါ်ကိုအသာပုတ်များနှင့်နားထောင်ခြင်း start ရိုးရိုး, နဖူးစည်းစာတမ်းသို့မဟုတ်ပေါ့ပ်အပ်ကြော်ငြာများနှင့်ကြားဖြတ်မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာရေဒီယို station ၏•ထောင်ချီ
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအကောင်းဆုံးဂီတ, အားကစား, သတင်းနှင့်ဟောပြောပွဲရေဒီယိုသို့ Tune ။
Radiogram Google ရဲ့ ကိုပစ္စည်းဒီဇိုင်း ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး interface ကိုသုံးစွဲဖို့လှပသောနဲ့ရိုးရိုးရှိပါတယ်။
• Chromecast ကိုထောက်ခံမှု
Radiogram သင့် TV နှင့်အခြားထောက်ပံ့ထားသည့်ကိရိယာများမှရေဒီယို station ကိုနှင်ထုတ်နိုင်။
• သင့်ရဲ့ကားထဲတွင် Listen
Radiogram အန်းဒရွိုက်အော်တိုထောက်ခံပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်ကားမှ Bluetooth မှတဆင့် Radiogram ချိတ်ဆက်နှင့်သွားလာရင်းရေဒီယိုလိုင်းများကိုနားထောင်ကြလော့
• Loading ကြိမ် Fast များမှာ
Radiogram ထိုကဲ့သို့သော ESPN ရေဒီယို, 77 WABC ရေဒီယို, က NPR သတင်း, ဂျက်ဇ်ဂီတ 24, Fox News Talk, ကောလိပ်ဘောလုံးရေဒီယို, နိုင်ငံရေဒီယို, Air1 အမေရိကန်မိသားစုရေဒီယို, ဘီဘီစီရေဒီယို 1, BBC World Service နှင့်အများအပြားကပိုအဖြစ်အကြီးအရေဒီယို station ပါရှိပါတယ်။
Radiogram ကြိုးစားနေများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးရေဒီယို app များအနက်တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားနေသေးငယ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိသည်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိကျတဲ့ရေဒီယိုဘူတာရုံကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါလျှင်တစ်ဦးကအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Radiogram: Music, Sports and Talk Radio အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Radiogram: Music, Sports and Talk Radio အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Radiogram: Music, Sports and Talk Radio အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Radiogram: Music, Sports and Talk Radio အား အခ်က္ျပပါ
rahullah စတိုး 128.84k 37.99M
Radiogram: Music, Sports and Talk Radio ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Radiogram: Music, Sports and Talk Radio အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://radiogr.am/privacy-policy.html
App Name: Radiogram: Music, Sports and Talk Radio
Release date: 2019-09-09 19:27:15
လက်မှတ် SHA1: 84:8A:EB:F1:2D:84:95:9E:AF:34:02:97:EF:B1:2F:75:AF:1C:CC:29
အဖွဲ့အစည်း (O): Radiogram
Radiogram: Music, Sports and Talk Radio APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ